यस्तो छ नायिकाहरुको तिहार योजना
लोकपथ संवाददाता कात्तिक २२, २०७५ | बिहिबार
काठमाडौं । पाँच हिन्दू नेपालीहरुको दोस्रो महान पर्वका रुपमा लिइने तिहारको रमझम शुरु भइसकेको छ । तिहारमा देउसी भैलो खेल्ने, दिदीबहिनीको हातबाट दाजुभाइले टीका लगाउने प्रचलन छ ।
हिन्दू धर्मका अनुसार दिदीबहिनीले तिहारमा टीका लगाइँदिदा शत्रु नाश हुने र दाजुभाइको आयु बढ्ने विश्वास गर्ने गरिन्छ । तिहारको रौनकले कलाकारलाई पनि छोइसकेको छ । काठमाडौंको झिलिमिलीमा सेलिब्रेटीले पनि आफूलाई रंगाउन थालेका छन् ।
यस वर्षको तिहारलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले पाँच जना नायिकाहरुलाई सोधेका थियौँ ।
मेरो लागि दिपावली विशेष पर्व पनि हो । हामीले दशैँ चाहिँ मनाउँदैनौँ । तिहारलाई हाम्रो मारवाडी समुदायमा विशेष रुपमा मनाउने गरिन्छ । गतवर्ष मिस वल्र्डका कारण दिवालीमा म घर जान पाइन । यसपटक दिवाली (दिपावली) मनाउन जन्मघर उर्लाबारी (मोरङ जिल्ला) जाँदैछु । त्यहाँ रमाइलो पनि उत्तिकै हुन्छ ।
आफ्नो भाइ सञ्जु मात्र भए पनि अंकलका छोराहरुलाई पनि टीका लगाइदिने गर्छु । मलाई यो पर्व सबैभन्दा बढी मन पर्ने चाड पनि हो । तिहारमा खेलिने भैलोले पनि उत्तिकै रोमाञ्चक बनाउँछ । घरमा आएका भैलेसँग हामी परिवार पनि नाच्ने गर्छौं । बच्चा बेलामा भैली खेल्दै हिँडिन्थ्यो । अहिले चाहिँ घरमा आएका भैलीसँगै रमाइलो गरिन्छ ।
यसपटक पनि तिहार सधैझैँ गरी मनाउँछु । यो वर्ष कान्छो भाइ अस्ट्रेलिया गएकाले उसलाई टीका लगाइदिन पाउँदिन । तिहार मलाई किन पनि विशेष लाग्छ भने, यो बेलामा आफूले परिवारलाई समय दिन सकिन्छ । घरमा मैले बनाएका भाइहरु र आफ्नै भाइहरु गरी पाँच जनालाई टीका लगाइदिँदै छु यसपटक ।
तिहारमा तास खेल्दा निकै रमाइलो लाग्ने हुनाले पनि हामी परिवार बसेर तास खेल्ने गर्छौँ । टीका लगाउनासाथ हामी तास खेल्न बसिहाल्छौँ । आफ्नै घरमा बस्ने, घरमा आएका भैलेहरुसँग देउसी खेल्ने पाइने भएकाले पनि तिहार मेरा लागि विशेष चाड हो ।
मलाई यो चाडले विशेष रमाइलो दिन्छ । गाउँमा अझ रमाइलो हुने भएकाले भाइटीका मनाउन म विराटनगर जाँदैछु । मेरा दुई भाइहरु गोपाल र अतीतलाई टीका लगाइदिँदै छु ।
तिहारकै लागि भनेर विराटनगर जान लागेकी हुँ । तिहारको अझ विशेष रमाइलो पक्ष के लाग्छ भने देउसी भैलो खेल्न आएकासँग रमाइलो गर्न पाइन्छ । प्रायः देउसी भैलोमा त आफ्नै गीत बजिरहेको हुन्छ । त्यो बेला झन् आनन्द लाग्छ । मेरा लागि तिहार रंगीन चाड हो ।
तिहारको त्यस्तो खासै विशेष योजना नै त केही छैन । पहिले देउसी खेलिन्थ्यो । अहिले त्यति खेलिन्न । आफ्नै भाइहरुसँग अंकलका भाइहरुलाई पनि टीका लगाइदिँदै छु । तिहारका लागि गरिने शपिङ र अरु देउसी खेलेको विशेष रमाइलो लाग्छ ।
लक्ष्मीपूजाको दिन घरमा रमाइलो गरिन्छ । पूजा गरिन्छ । यसपटक पनि मैले दाइलाई टीका लगाइदिँदै छु । अंकलका छोराहरुलाई पनि लगाइदिन्छु होला । तिहारमा टीका लगाएपछि चाहिँ हामी घरका मान्छे बसेर तास खेल्ने गर्छौं । रमाइलो गर्छौं । परिवारसँग रमाइलो गर्न पाइने भएर पनि तिहार मलाई रमाइलो लाग्छ ।
उत्तर कोरियासँगको उच्चस्तरीय वार्ता स्थगित
समुन्द्र र एलिजाको रोमान्स, 'अनुराग' गीत रिलिज
काठमाडौं । 'अनुराग' सिनेमाको दोस्रो गीत रिलिज गरिएको छ । 'यस्तो साथी' बोलको रोमान्टि...
'कायरा' रिलीज डेट फाईनल, साउन १८ आर्यन र साम्राज्ञीको रोमान्स
काठमाडौं । नायक आर्यन सिग्देलले पहिलो पटक आफ्नो सोलो व्यानरमा निर्माण गरिएको सिनेमा 'कायरा'को ...
बैशाख २७, २०७५ | बिहिबार
अवार्डको हरिबिजोग, ग्रीन कार्डको लोभमा भित्रभित्रै किनबेच !
काठमाडौं । केही हप्ताअघि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एक अवार्ड कार्यक्रम सम्पन गरियो । उक्त अवार्ड कार्यक्...
जेठ २३, २०७५ | बुधबार
प्रमोद अग्रहरी भन्छन् - ‘कथा काठमाडौं’ मा म्यासेज छ, हरेक नेपालीले हेर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने टेलिश्रङ्खला ‘सिंहदरबार २’ मा युवराज झाको भूमि...
भदौ २८, २०७५ | बिहिबार
ओहो ! एक तोलाको औँठी ?
स्थान : चोभार, काठमाडौं । मिति : २०७४ पुस १० गते अनि सन्दर्भ चाहिँ स्कुल पढेका...